အီတလီနိုင်ငံ၊ ရောမမြို့တွင် ကျင်းပသည့် “အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေရေးရာ အထောက်အကူပြုအဖွဲ့၏ နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံ” သို့ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် တက်ရောက် ဆွေးနွေးခြင်း | Union Attorney General’s Office Skip to main content
အီတလီနိုင်ငံ၊ ရောမမြို့တွင် ကျင်းပသည့် “အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေရေးရာ အထောက်အကူပြုအဖွဲ့၏ နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံ” သို့ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် တက်ရောက် ဆွေးနွေးခြင်း
အီတလီနိုင်ငံ၊ ရောမမြို့တွင်ကျင်းပသည့် “ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာဥပဒေရေးရာအထောက်အကူပြုအဖွဲ့၏ နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံ”ံသို့ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် တက်ရောက် ဆွေးနွေးခြင်း
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးသည် အီတလီနိုင်ငံ၊ ရောမမြို့၌ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့မှ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသည့် “အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရေးရာအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ (IDLO) ၏နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံ” သို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါညီလာခံသို့ အီတလီနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ IDLO ဥက္ကဌ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ IDLO ၏ အလှူရှင်နိုင်ငံများနှင့် IDLO ၏ လုပ်ငန်းများအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်နိုင်ငံများမှ ဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်က ဆွေးနွေးရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးနေပြီး ဥပဒေရေးရာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပါအဝင် ကဏ္ဍအသီးသီးကို တိုးတက် ကောင်းမွန်စေရန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးသည် ၂၀၁၅-၂၀၁၉ ခုနှစ် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကို ချမှတ်၍ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တရားမျှတမှုကဏ္ဍတိုးတက်ရေးတွင် ပြည်သူများက ဥပဒေအသိပညာ ပိုမိုသိရှိလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (UNDP) နှင့် IDLO တို့က နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများ၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစင်တာများကို ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ IDLO အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေရေးရာကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် ပိုမိုပံ့ပိုးကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် မျှော်လင့်ကြာင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့သည်။
IDLO သည် ဖွံ့ ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ပြောင်းလဲနေသည့် နိုင်ငံများ၌ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရားမျှတမှုကဏ္ဍတိုးတက်ရေးနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း များကို အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး IDLO နှင့် ပြည်ထောင်စုရှ့နေချုပ်ရုံးတို့သည် ဥပဒေအရာရှိများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ရေးနှင့် မျှတသည့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းများကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းများကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် နားလည်မှုစာချွန်လွှာတစ်ရပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တရားမျှတမှုကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက် တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားကြမည် ဖြစ်သည်။ အဖှငျ့စာမကျြနှာ
756718Since: 08/01/2013 - 19:50 Copyright © 2013 - 2017 Union Attorney General’s Office. All rights reserved. Powered by : Information Matrix